Faahfaahin diyaarad nooca duuliye la’aanta ah oo goor dhow lagu soo riday Soomaaliya – SBC
Faahfaahin diyaarad nooca duuliye la’aanta ah oo goor dhow lagu soo riday Soomaaliya
Wararka ka imaanaya Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan deegaanka Bardaale ee Gobolka Bay oo 250km u jira caasimada Soomaaliya Muqdisho ayaa waxaa lagu soo tuuray Diyaarad nooca duuliye la’aanta ah oo uu mareykanka leeyahay.
Maad Enow Aade, oo ka mid ah odayaasha Deegaanka Bardaale aya u sheegay TV laga leeyahay wadanka iiran in ay maqleen dhawaq xoog leh xilli diyaaradu ay dul martay Magaalada waxaana ka dib uu arkay diyaarada oo ololeysa oo dhulka ku dhacday meel aan ka fogeyn goobtii uu joogay.
Ninkani Goobjoogaha waxaa uu sheegay in olol iyo qarax ay sameysay diyaarada waxaana uu sheegay in diyaaradu soo dhicideeda aysan qofna waxyeelo u geysan.
Diyaaradaha Duuliye la’aanta ee Mareykanka waxaa ay duqeymo mudooyinkan ka geysanayeen Gobolada Koonfurta soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay ku xoogan yihiin Alshabaab iyagao horeyna dilal ugu geystay saraakiil sar sare oo shabaab iyo alqaacida ka tirsan.
Dhawantan ayay hayad markii diyaarad nooca bilaa duuliyaha ah ay 20 qof oo rayid ah ku dhaawacday Duleedka Magaalada Kismaayo waxaana dadkaas ku jiray 8 haween ah kuwaasi oo ku dhaawacmay diyaarada Duuliye la’aanta ah.
Sidoo kale Alshabaab waxay dhawaan sheegteen inay Soo tureen mid ka mid ah diyaaradaahaas oo markii danbe ay geysteen Fariisin ay ku laahayeen Gobolada Jubooyinka.
Diyaaradaha Duuliye la’aanta waxaa uu mareykanka ka howlgaliyay dalal 6 ah oo ay ku jirto soomaaliya si loo ciribtiro dagaal yahanda alqaacida ee kusoo qulqulaya Gobolada Dalka ee Soomaaliya.